ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်သင့်တင့်မျှတမှုမရှိသောသဘောထားများ - Your Brain On Porn နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောလေ့လာမှုများ
ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများဖြစ်သည်
ဤစာမျက်နှာကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (စာမျက်နှာမှာလည်းအထီးဆီသို့ဦးတည် un-သာတူညီမျှသဘောထားမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများပါရှိသည်) အမြိုးသမီးမြားအပျေါအသာတူညီမျှသဘောထားတွေကိုအားပေးအားမြှောက်သောပေါ်ပြူလာ sexology ပြောဆိုချက်ကို debunk ကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုစုဆောင်း။
ဤစာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသော ၂၀၁၆ လေ့လာမှုမှစတင်ကြပါစို့ -“အပြာစာပေသည်“ အမျိုးသမီးများကိုမုန်းတီးခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်ပင်လော။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ၏နမူနာတွင် Nonusers များထက်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာသဘောထားများပိုမိုရှိကြသည်။ " ဒါဟာအကြီးအကျယ်ကိုးကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လိုလားသူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သာတူညီမျှမှုဝါဒနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးနည်းမှုများကို ဦး တည်ကြောင်းခိုင်လုံသောသက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီ Taylor Kohut လေ့လာမှု (က 2017 Kohut စက္ကူ) တစ်တပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်နည်းစနစ်လိမ်ဖို့ဘယ်လိုတစ်ခုမှတ်သားစရာများဥပမာပေးပါသည်။
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြအဆိုပါတေလာ Kohut လေ့လာမှု သာတူညီမျှ as: (၁) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု၊ (၂) အမျိုးသမီးရေးရာဖော်ထုတ်ခြင်း၊ (၃) အာဏာရာထူးများရှိသောအမျိုးသမီးများ၊ (၄) အမျိုးသမီးသည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိသည့်အချိန်တွင်မိသားစုဘဝသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရပြီး၊ ရိုးရာမိသားစုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထား။ သငျသညျကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျသောအရာကိုနေပါစေယင်းကိုတွေ့မြင်ရန်လွယ်ကူသည် ဘာသာရေးလူ ဦး ရေဝေးဂိုးသွင်းလိမ့်မယ် အနိမ့် Taylor Kohut ၏ ၅ တန်းပါ“ သာတူညီမျှမှု” အကဲဖြတ်မှုအပေါ်.
သော့ချက် - ပိုပြီးလစ်ဘရယ်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့လောကလူ ဦး ရေမှာများစွာရှိသည် ဘာသာရေးလူဦးရေထက် porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားနှုန်းထားများ။ ဤအစံရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်အဆုံးမဲ့သည်အခြား variable တွေကိုလျစ်လျူရှုအသုံးပြုပုံခဲရေးသားသူတေလာ Kohut "ဟုသူကပါဝငျသောအရာကိုသူ့ရဲ့လေ့လာမှုရဲ့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်တော်မူရွေးချယ်ရေးအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ porn အသုံးပြုသူများကိုအတူတက်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိတယ်သာတူညီမျှ။"ထိုအခါသူကအားလုံးကိုပတ်ချာလည်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson က Kohut လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျ: porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Taylor Kohut သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemsနာအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပြေလည်စေရန် 'ဖန်တီးမှု' လေ့လာမှုများကိုထုတ်ဝေသည်။ In ဒီ 2017 လေ့လာမှု, Kohut သူရှာခဲ့တဲ့ရလဒ်ထုတ်လုပ်ရန်နမူနာ skewed ကြပုံပေါ်ပါတယ်။ အများဆုံးလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများက '' အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောလူနည်းစုမိန်းမတို့၏ဤလေ့လာမှု 95% အတွက်, porn ကိုအသုံးပြုပြသသွားရမည်အကြောင်း (အမျိုးသမီး 85% ဆက်ဆံရေး၏အစအဦးကတည်းက porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်) မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် porn ကိုအသုံးပြု! အဖြစ်မှန်: အကြီးဆုံးအမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) မှ Cross-Section data တွေကိုအမျိုးသမီးတွေသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Kohut ရဲ့အသစ် က်ဘ်ဆိုက် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု သူကပဲအစီအစဉ်ရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Kohut ၏ဘက်လိုက်မှုကိုလည်းမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှု M-47 (ကနေဒါ) အတွက်ရေးသားထားသောအကျဉ်းချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Kohut နှင့်သူ၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများသည်အတိုချုပ်လေ့လာမှုများတွင်ချယ်ရီကောက်နေသည့်အစွန်အဖျားလေ့လာမှုများတွင်လက်ရှိညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောရယ်မောဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများအားဖော်ပြခြင်းသည်သူတို့၏ဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ 2019 ခုနှစ်တွင် Kohut သူသည်နှုတ်ဆိတ်နေရန်သူ၏မဟာမိတ်များပူးပေါင်းသောအခါသူ၏အစွန်းရောက်အစီအစဉ် - မောင်းနှင်မှုဘက်လိုက်မှုအတည်ပြုခဲ့သည် YourBrainOnPorn.com။ Kohut နှင့် သူ၏သူငယ်ချင်းများ www.realyourbrainonporn.com မှာစေ့စပ်နေကြတယ် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်.
သမ္မာတရားကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာတူညီမျှ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ) အကဲဖြတ်နီးပါးတိုင်းလေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးလစ်ဘရယ်များနှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်အလွန်ပြဿနာအဖြစ်မှတ်သောမိန်းမတို့ကိုအပျေါအသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ်ကြောင်း။ (ဤလေ့လာမှုများအားလုံးအကြောင်းကိုတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ သဘောထားက။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမှန်တကယ်ကျူးကျော်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအစီရင်ခံခဲ့လျှင်ပင်သဘောထားဆက်စပ်မှုများကိုမဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုများတွင်မပါဝင်ပါ။ သူတို့အားလေ့လာမှုများကိုကြည့်ပါ ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ (မုဒိမ်းမှုနှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောတောင်းဆိုမှုများကိုဖော်ပြသည်).
သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့် meta-analysis ၏စာရင်း (စာရင်းစာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis သည်နှင့်အတူစတင်)
မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 ။ (2016) - စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ ကောက်နုတ်ချက်:
အမျိုးသမီးများ၏လိင် objectifying ပုံဖော်ခြင်းအမျိုးသမီးများ၏အခြားသူတွေ '' ဆွဲဆောင်မှုပေါ်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အမျိုးသမီးရဲ့အမြင်များပေါ်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုမှထိတွေ့မှု၏အလားအလာသက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေပြုစုပျိုးထောင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအတွက်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုရှိပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက်မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ပင်ကိုယ်မူလစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ synthesize ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက် 1995 နှင့် 2015 အကြား peer-ပြန်လည်သုံးသပ်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်များထုတ်ဝေသုတေသနအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 109 လေ့လာမှုများပါရှိသောကြောင့် 135 စာပေတစ်ဦးကစုစုပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဤအကြောင်းအရာပုံမှန်အစည်းအဝေး, နေ့တိုင်းထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးကိုတိုက်ရိုက်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်အကျိုးဆက်များတစ်အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတသမတ်တည်းသက်သေအထောက်အထားများ, သာ. ကြီးမြတ် Self-objectification, လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုမိုထောက်ခံမှုပေးအဆိုပါတွေ့ရှိချက်များနှင့် အမြိုးသမီးမြားအပျေါအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်။ ထို့အပြင်ဤအကြောင်းအရာစမ်းသပ်ထိတွေ့အမျိုးသမီးအရည်အချင်းကို, စာရိတ္တနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တခုလျော့နည်းသွားအမြင်ရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်နေသည်။
တစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2019): လိင်သဘောထားခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖို့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ Exposure ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ Meta-analysis သည်အကျိုးစီးပွားအားလုံး variable တွေကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများသရုပ်ပြပေမယ့်အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအနည်းငယ် variable တွေကိုအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ အများစုကအထူးသအပေါင်းတို့, အသက်အရွယ်အဘို့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုသရုပ်ကြ၏ သို့သော် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကောင်းအဟောင်းတွေသင်တန်းသားများကိုဖွယ်ရှိငယ်ရွယ်သောသင်တန်းသားများကိုထက်အပေါ်ကိုဆွဲဖို့ပိုနှိုင်းယှဉ်, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတွေ့အကြုံရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထင်ဟပ်, ထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အကြီးစားထက်ပိုမိုခဲ့ [36, 37] ။ ထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထီးအဘို့အအားကောင်းခဲ့သည်, ဖြစ်ကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်  ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုကိုက်ညီခြင်းနှင့်အထီးဇာတ်ကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်  ကိုလျော့နည်းမကြာခဏအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ထက်အပြစ်ပေးကြောင့်ကြောင့်။
အပြင်းအထန်အဆိုပါ ICD-11 ထဲကအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Disorder ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်နှစ်ပေါင်းအဘို့, ဖာဂူဆန်, အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အယူအဆတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (သူ 2018 တကား, မိမိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအများအပြားမျက်နှာစာပေါ်ဆက်လက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ) တကယ်တော့ဖာဂူဆန်နှင့်နီကိုးလ် Prause ခုနှစ်တွင် အဓိကစက္ကူပေါ်မှာ Co-စာရေးဆရာများအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုစီရင်ချက်ကိုပယ်ရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ (သူတို့အခိုင်အမာအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်စာတမ်းများတစ်စီးရီးအတွက် debunked ခဲ့ကြသည် ၏ဤပြဿနာ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်။ ) ဤတွင်ယင်း Meta-analysis သည်၏စာရေးဆရာများ parameters များကိုဖာဂူဆန်ရဲ့တရားခံရွေးချယ်မှုသည်သူ၏ရလဒ်ထုတ်လုပ်ပုံကိုဖော်ပြရန်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးသဘောထားများကို: Nonexperimental လေ့လာရေးအတွက်ဆက်ဆံရေး (2010) ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန် - စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
Meta-analysis သည် nonexperimental လေ့လာမှုများယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်၎င်းတို့၏သဘောထားများအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု supporting အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ Meta-analysis သည်ယခင်ကထုတ်ဝေ Meta-analysis သည်နှင့်အတူပြဿနာများတညျ့နှင့်ပိုပြီးမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များကဆက်ပြောသည်။ အစောပိုင်း Meta-analysis သည်မတူဘဲ, လက်ရှိရလဒ်တွေကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေအကြားတစ်ဦးခြုံငုံသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ပြသ nonexperimental လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ အဆုံးစွန်သောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုလည်းသိသိသာသာဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်ပေမယ့်အပြင်, ထိုကဲ့သို့သောသဘောထားတွေ, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူထက်လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပတျသကျမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ရှိရာသို့ သွား. နှင့်မုဒိမ်း၏အသေးအဖွဲ (1982) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့သဘောထားအပေါ်ယုံကြည်ချက်အပေါ်ညစ်ညမ်းဆက်လက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိခဲ့ ညစ်ညမ်းဖို့အကြီးအကျယ်ထိတွေ့မှုမုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသူအဖြစ်အမျိုးသမီးဆီသို့သနားဆုံးရှုံးမှုအတွက်နှင့်အထွေထွေအတွင်းအမျိုးသမီးများဆီသို့ရလဒ်.
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမှ Exposure: တစ်ဦးကဆက်စပ်မှုလေ့လာမှု (1986) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တစ်ထိန်းချုပ်မှုရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကွောငျးအုပ်စုတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, အကြမ်းဖက်ရုပ်ရှင်ပြသနေသောအထီးဘာသာရပ်များပစ္စည်းများနှင့်ပိုမိုသဘောတူညီခဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောလူ့အကြမ်းဖက်မှုများ ထက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များကိုပြု၏။ အဆိုပါခန့်မှန်းဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိခဲ့ပါသည်ပေမယ်သို့သော်ဟောကိန်းများဆန့်ကျင်, မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီသူတို့ရဲ့လက်ခံမှုအတွက်အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိ၏။
ကိုမြင်လျှင်ပုလ်ယောက်ျား, sexy မိန်းမ, ကျား, မကွဲပြားမှု: ကျား၏ညစ်ညမ်းမှ Exposure နှင့်သိမြင်မှုတည်ဆောက်မှုများ (1997) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လေ့လာရေး3နှင့်4ခုနှစ်, မြင့်မားတဲ့ထိတွေ့မှုယောက်ျားအများဆုံးယောက်ျားပုလ်အပြုအမူတွေလုပ်ဆောင်ကြောင်းစဉ်းစားရန်အနိမ့်ထိတွေ့မှုယောက်ျားထက် ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ လေ့လာရေး5နှင့်6ခုနှစ်, မြင့်မားတဲ့ထိတွေ့မှုယောက်ျားကောက်ကာငင်ကာအမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက် generate လည်းပိုပြီး lo ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာမှု7အတွက်, မြင့်မားတဲ့ထိတွေ့မှုယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက် / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂီတဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အရှိဆုံးကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရိပ်မိs ကို; အနိမ့်ထိတွေ့မှုယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာသူတွေကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်အရှိဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုရိပ်မိ၏။ T ကhese လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းထိတွေ့ယောက်ျား, မိန်းမ, ကျား, မဆက်ဆံရေးကိုနားလည်၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အခြေခံနည်းလမ်းများကိုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Sexism နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အတိတ်ရှင်းပြခါနီး (တရားမဝင်သော) ရလဒ်များကို (2004) - ဒီတစ်ခုကအပြင်ထွက်သွားပေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
လေ့လာမှု 1 ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုလျော့နည်းလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေပြသထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ခေတ်ပေါ် sexism နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။ လေ့လာမှု2ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောတဲ့သူသင်တန်းသားများကိုပိုပြီးအကျိုးပြု sexism ပြသထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးပြု sexism အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ယခင်သုတေသနများအကြီးအကျယ်အပြီးအပြတ်ကောက်တွေ့ရှိချက်နှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ Self-အစီရင်ခံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအသုံးပြုခြင်း (2005)
ဤသည် Cross-Section လေ့လာမှုအီတလီနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းအမျိုးမျိုးတက်ရောက်ခြင်း, 804 နှစ် 14 ကနေအသက် 19 မြီးကောင်ပေါက်, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ, ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဓိကပန်းတိုင်များဖြစ်ကြသည်: (ဈ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်း (မဂ္ဂဇင်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း) နှင့်မလိုချင်သောလိင်အကြားဆက်ဆံရေးတက်ကြွစွာနဲ့ passive ပုံစံများအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်, (ii) ကျား, မများနှင့်အသက်အရွယ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူဤအဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစူးစမ်းခြင်းငှါ၎င်း, နှင့် (iii) မလိုချင်တဲ့လိင်မြှင့်တင်ရန်အများဆုံးများပါတယ်သောအချက်များ (ညစ်ညမ်း, ကျား, မများနှင့်အသက်အရွယ်) စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တက်ကြွစွာနဲ့ passive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မလိုချင်သောလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပြသခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဘာစွဲ, ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ဤ variable တွေကိုတို့တွင်ဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပြုလေ၏။ သင်တန်းသားများကို 690 နှစ်ခုအလယ်မှာကျောင်းများမှကျောင်းသားများနှင့်ဆိုးလ်အတွက်အမြင့်သုံးကျောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဘာစွဲ, ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ်ယေဘုယျလက္ခဏာများသည်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကို နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ် မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဘာစွဲကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးသူတို့၏အပ်ချုပ် (2007 မှဆယ်ကျော်သက် '' Exposure) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းယုံကြည်ချက် [745 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အသက် 13 ၏ On-line ကိုစစ်တမ်း 18 မှ] ။ ပိုများသောအထူးသကျနော်တို့ (ဆိုလိုသည်မှာ, အမြင်အာရုံနဲ့ audio-အမြင်အာရုံလိင်တ္ထုများနှင့်မတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ) ရှိမရှိနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်လေ့လာခဲ့ ) ပိုကောင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအဖြစ်သို့မဟုတ် hierarchical အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ On-line ကိုရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုသိသိသာသာအမျိုးသမီးများသည်နောက်ဆုံးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်အတွက်လိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာခဲ့သည်, သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အခြားပုံစံများကိုထိတွေ့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆတွေအကြားဆက်ဆံရေးမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများများအတွက်ကွဲပြားဘူး
ဟောင်ကောင်ရှိလူပျိုတို့ဖွငျ့ cyberpornography များအသုံးပြုမှုတချို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (2007) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဒီလေ့လာမှုကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ငယ်ရွယ်တရုတ်ယောက်ျားတစ်နမူနာအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်နှင့်၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, သင်တန်းသားများရှိသည်သတင်းပို့သူကို ပိုပြီးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဆီသို့အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုလိုကျ၏အတိုင်းအတာများနှင့် proclivities အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်.
X-Rating: အမေရိကန်နှင့်ဆက်စပ်လိင်သဘောထားနှင့်အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (2009) ကိုအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအရွယ်ရောက်မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်, X-rated ရုပ်ရှင်များ, နှင့်အင်တာနက်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနမူနာအခြေခံ = 13.6 နှစ်ပေါင်းမှာ (ပျှမ်းမျှအသက်တစ်အလားအလာစစ်တမ်းများတွင်လေ့လာကြသည် ဟူ. ၎င်း, N ကို = 967) ။
longitudinal ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအထီးအဘို့အအစောပိုင်းထိတွေ့ခန့်မှန်းကြောင်းပြသ ဒီထက်တိုးတက်သောကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားများပိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ကျူးလွန်နှင့်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်း။ အမျိုးသမီးများအတွက်အစောပိုင်းထိတွေ့နောက်ပိုင်းတွင်လျော့နည်းတိုးတက်သောကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေဟောကိန်းထုတ်နှင့်ခံတွင်းလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်း။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးအပ်ချုပ်: အကဲဖြတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နှင့် underlying လုပ်ငန်းစဉ် (2009) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (SEIM) မှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုများအကြားယခင်ကထူထောင် link ကိုအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းလင်းဖို့ပဲနဲ့ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေ။ 962 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အကြားသုံးလှိုင်း panel ကိုစစ်တမ်းကနေဒေတာ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်၏အခြေခံတွင်အစပိုင်းတွင်ကြောင်းပြသ SEIM နှင့်လိင်တ္ထုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်တစ်ဦးအပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေထိတွေ့။ Tလိင်အရာဝတ္ထုကျား, မအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ပါဘူးအဖြစ်သူအမျိုးသမီးများ၏အယူအဆတွေအပေါ် SEIM ၏သက်ရောက်မှုကိုညွှန်ကြား။ သို့သော် SEIM မှထိတွေ့မှုအပေါ်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေ၏တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအထီးမြီးကောင်ပေါက်အဘို့ကိုသာသိသာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုမသက်ဆိုင်မြီးကောင်ပေါက် '' ကျား၏, SEIM ၏အကြိုက်အမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းသူတို့၏ယုံကြည်ချက်အပေါ် SEIM မှထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ် SEIM မှထိတွေ့မှုပေါ်ဤအကြောင်းယုံကြည်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ, အမြိုးသမီးမြား၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်လိင်ခွင့်ပြုချက်သဘောထားများကိုဂျပန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ '' မီဒီယာ Exposure (2011) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဂျပန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများက '' ဆန်းစစ် (N ကို = 476) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များ နှင့်လိင်အလိုလိုသဘောထားတွေ။ ရလဒ်များဂျပန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအင်တာနက်ကိုလိုက် SEM များအတွက်အရင်းအမြစ်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား / Video / DVD ကိုအဖြစ်အများဆုံးမကြာခဏပုံနှိပ်မီဒီယာအသုံးပြုသောကဖော်ပြသည်။ အထီးသင်တန်းသားများကို SEM အမျိုးသမီးထက်သိသိသာသာပိုပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ SEM ထိတွေ့ဂျပန်သင်တန်းသားများကို '' လိင်အလိုလိုသဘောထားများနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ခဲ့သော်လည်းအပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး, SEM မှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။
အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ကျပုံစံယုံကြည်ချက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2011) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုလှိုင်း ၂ ခုပါ ၀ င်သည့်စစ်တမ်းနှစ်ခုမှဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် ၁၄၄၅ ဦး နှင့်ဒတ်ခ်ျအရွယ်ရောက်သူ ၈၃၃ တို့၏အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလက္ခဏာများခုခံတွန်းလှန်နေသည်ဟုအယူအဆကိုအလေးထားခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကြီးများ, ဒါပေမယ့်မရမြီးကောင်ပေါက်, အမျိုးသမီးလိင်မှတိုကင်နံပါတ်ခုခံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းယုံကြည်ချက်အပေါ် SEIM များ၏သက်ရောက်မှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
အဖွဲ့များကြားတွင်အမျိုးသားများအကြားကိုကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်း: ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault (2011) အပ်ရန်အပြုအမူရည်ရွယ်ချက် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင်ကွဲတွေထဲမှာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများကို (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ငယ်ရွယ်ဒိန်းမတ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ခြေ-based နမူနာများနှင့်ကျပန်းစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ဒီလေ့လာမှုလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေအပေါ်အတိတ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသက်ရောက်မှု, အကြမ်းမဖက်ညစ်ညမ်းမှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှု, ရိပ်မိညစ်ညမ်း၏သရုပ်မှန်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (ဆိုလိုသည်မှာနှငျ့ညီညှတျ) စုံစမ်းစစ်ဆေး (ဆိုလိုသည်မှာ, သဘောထားများ ) အမျိုးသမီးများ, ရန်လိုခြင်းနှင့်အကျိုးပြု sexism ဆီသို့။ ထို့ပြင်လိင်စိတ်နိုးထဖျန်ဖြေအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကြောင်းပြ လူတို့တွင်တစ်ခုတိုးလာအတိတ် ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသိသိသာသာအမျိုးသမီးများနှင့်ပိုပြီးရန်လို sexism ဆီသို့လျော့နည်းသာတူညီမျှသဘောထားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အောက်ပိုင်းနှငျ့ညီညှတျသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှု၏သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများနှငျ့ညီညှတျသင်တန်းသားများအတွက်အနိမ့်အကြားရန်လို sexism အဘို့နှင့်အမျိုးသမီးအကြားအကျိုးပြု sexism များအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Exposure ၏ Recency, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, Objectifying မီဒီယာ (2013) မှအတိတ်မှ Exposure: အ Centerfold Syndrome ကိုသက်ဝင် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤသည်စမ်းသပ်လေ့လာမှုအမျိုးသမီး centerfold ပုံရိပ်တွေထိတွေ့ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယုံကြည်ချက်တွေကိုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်ဂယ်ရီ Brooks အသုံးအနှုန်းများအစုတခုအတွက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ဖို့ကူထီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါ centerfold syndrome ရောဂါငါးယုံကြည်ချက်ပါဝင်ပါသည် "ဟုအဆိုပါ centerfold syndrome ရောဂါ။ ": voyeurism, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ reductionism, ပုလ် validation ကို, trophyism နှင့် nonrelational လိင်။ မီဒီယာ objectifying ဖို့အတိတ်ထိတွေ့အပြုသဘောအားလုံးငါး centerfold syndrome ရောဂါယုံကြည်ချက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ centerfolds မှမကြာမီကထိတွေ့လိင် reductionism, ပုလ် validation ကိုနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၏ nonrelational လိင်ယုံကြည်ချက်အပေါ်ချက်ချင်းအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ သူကိုလျော့နည်းမကြာခဏမီဒီယာ objectifying ရှုမြင်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 48 နာရီတည်မြဲမှု။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကတိသစ္စာပြုလှုပ်ရှားမှုမှအတိုက်အခံ: အလားအလာလေ့လာမှု (2013) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ညစ်ညမ်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုမကြာခဏမိန်းမတို့အဘို့သနားကရုဏာနဲ့ကိုယ်ချင်းစာလျှော့ချဖို့တွေးဆခဲ့လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏အလားအလာအရင်းအမြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမျိုးသား panel က data တွေကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့သည်။ ဒေတာကိုအခြေခံမှာအသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိ 2006 လူကြီးများအနေဖြင့် 2008 ထံမှ 2010 မှ 190, 19 နှင့် 88 အတွက်စုဝေးကြ၏။ ညစ်ညမ်းကြည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၏အစီရင်ခံစားသုံးမှုမှတဆင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်အရေးယူဆီသို့သဘောထားတွေအမျိုးသမီးတွေမျက်နှာသာကြောင့်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးအလေ့အကျင့်မှအတိုက်အခံကနေတဆင့်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ မီဒီယာသက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးလူမှုရေးသင်ယူမှုရှုထောင့်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, ကြိုတင်ညစ်ညမ်းကြည့်အပြုသဘောဆောင်ဖို့နောက်ဆက်တွဲအတိုက်အခံဟောကိန်းထုတ် ပင်ကြိုတင်အပြုသဘောဆောင်အရေးယူသဘောထားများနှင့်အခြားအလားအလာရှက်ကြောက်တဲ့အရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်အရေးယူ။ ကျား, မဒီအသင်းအဖွဲ့များပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ လက်တွေ့ကျကျ, ဤအရလဒ်များကိုကြောင်းအကြံပြု ညစ်ညမ်းမိန်းမတို့အဘို့အပြုသဘောဆောင်အရေးယူမှုအစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ခံမှုအားနည်းစေပြီးတစ်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်နိုင်သည်.
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေး, နှင့်လူငယ်လူကြီးလိင်ကွဲအမျိုးသားများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရိုမန်းတစ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် (2014) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသောလိင်ကွဲလိင်ခြားသူ ၃၇၃ ယောက်အကြားယောက်ျား၏အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ဥပမာ - ကျားမအခန်းကဏ္ conflict ဆိုင်ရာပconflictိပက္ခနှင့်ပူးတွဲမှုပုံစံများနှင့် (ဥပမာအားဖြင့်ဆင်းရဲသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု) ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များကဖော်ပြသည် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှစ်ဦးစလုံးကြိမ်နှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခပိုမိုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်, ဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေး, နှင့်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု။ ထို့အပြင်တွေ့ရှိချက်ပေးအပ် ကျားမအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခပူးတွဲမှုစတိုင်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် relational ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည့်အတွက်ဆိုခဲ့ကမကထပြုခဲ့မော်ဒယ်ထောက်ခံမှု။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်သလဲ? re-ဆန်းစစ်တတိယ variable ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူမြစ်ဆုံမော်ဒယ် (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၏ Confluence ပုံစံ (Malamuth, Addison, & Koss, 2000) ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်ကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်စေခြင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာပြiscနာ (SP)၊ အဆိုပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုအန္တရာယ်အချက်များ၊ အင်တာနက်ကိုအခြေခံပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူ (N = 183 အရွယ်ရောက်ယောက်ျား) မဟုတ်ဘဲကွာခဏထက်မကြာခဏသူတို့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောအခါ, HM နှင့် SP မြင့်မားခဲ့ကြသောသူတို့သညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ထိုကဲ့သို့သောယခင်မြစ်ဆုံမော်ဒယ်သုတေသနရလဒ်များကပုံတူကူးယူ။ အသစ်ကမြေပြင်ကိုစူးစမ်းခြင်း, ဒီလေ့လာမှုလည်း HM နှင့် SP အတူတကွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မြင့်မားအန္တရာယ်မှာယောက်ျားယောက်ျားထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုစားသုံးကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့အကြမ်းမဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ, နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏စားသုံးမှုခိုင်မာတဲ့ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည် အနိမ့်စွန့်စားမှာပါ။
အမျိုးသမီးများနေ့ခါနီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်ကျားမသဘောထားတစ်ဦးကအမျိုးသားအလားအလာလေ့လာမှု (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူအမျိုးသားနှစ်ဦး-လှိုင်း panel ကိုနမူနာအတွက် nonsexual ကျား-အခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များစူးစမ်း။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကျား-အခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသက်အရွယ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်။ အထူးလှိုင်းတဦးတည်းမှာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအငယ်-လူကြီးများအတွက်အဟောင်းတွေ-ပေမယ့်မလှိုင်းနှစ်ခုမှာပိုပြီးလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာသဘောထားများခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု၏ Antecedents: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2015) - အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင် - ပုလ်နှင့်လိင် - မိန်းမတို့၏သဘောထားများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
1557 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အကြားပစ္စုပ္ပန် Two-လှိုင်း panel ကိုစစ်တမ်းချစ်ခင်-ရေးရာ, ကြီးစိုး-Theme နှင့်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံ SEIM ထိတွေ့လေ့လာခွငျးဖွငျ့ထိုအ lacunae အမှာစကားပြောကြားသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူအဟောင်းများမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏကြီးစိုး-ရေးရာ SEIM ထိတွေ့စဉ်တွင်အငယ်မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏချစ်ခင်-ရေးရာ SEIM ထိတွေ့ခဲ့သည်။ က Hyper ပုလ်ယောက်ျားလေးများနှင့် Hyper ဣတ္မိန်းကလေးတွေပိုပြီးမကြာခဏအကြမ်းဖက်မှုပုံစံ SEIM ထိတွေ့ခဲ့သည်.
'' ဒါဟာသင့်ရဲ့မျက်နှာပဲရှိတယ်အမြဲဖွင့် ': porn အပေါ်လူငယ်များရဲ့အမြင်များ (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တွေ့ရှိချက်များအရလူငယ်များသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်မရည်ရွယ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုကိုခံနေရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အမျိုးသားများ၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်လက်အောက်ငယ်သားများအားအားဖြည့်ပေးသည့်ကျား၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကြည့်ရှုနေသည့်အရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အမျိုးသမီးများအားဖိအားပေးမှုတို့အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး (2015) မှဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလှုံ့ဆော် - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်အများအပြားတွန်းအားပင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်တစ်ကြည့်ရှုနေသူအဖြစ်ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်စိတ်အားထက်သန်၏ဖိနှိပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများဆီသို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရှိရာသို့ သွား. အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အကြံပြုခြင်းအတွက်အခြားသူများကိုကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
ငါး Shades ထူးအိမ်သင်၏ & Emerging အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများစာရှုသူများအနက်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများကို (2015) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ပေါ်ပြူလာယဉ်ကျေးမှုအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ပုံစံလိင်အရအခွင့်အရေးကိုယ်စားပြုပုလ်၏တင်းကျပ်အမြင်များအားဖြည့်ပျက်စီးလွယ်ခြင်းနှင့်အားနည်း, unassertive, ငြိမ်းချမ်းသော, အဓိပ်ပါယျမရှိသောအဖြစ် (ဥပမာ, Master ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အဖြစ်အထီး, အရန်လို) နှင့်ဣတ္ (ဥပမာ, မိန်းမနှင့် စိတ်ခံစားမှုဖြင့်ဖြစ်စေ) မောင်းနှင်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနေရာအနှံ့အစဉ်အလာကျားမအခန်းကဏ္ဍကိုယ်စားပြု-နှင့် 715-18 နှစ်ပေါင်း 24 အမျိုးသမီးတွေအသက်အရွယ်မရွေးနမူနာကြားတွင်နောက်ခံလိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်လည်းပါဝင်သည်သောစိတ်ကူးယဉ်စီးရီးငါး Shades-One လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုယန္တရားအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ Ambivalent Sexism Inventory မှတိုင်းတာသည့်အတိုင်း Shifty Shades ၏စာဖတ်သူနှင့် sexism အကြားဆက်နွယ်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့် Shifty Shades ကိုဖတ်ရှုသောအမျိုးသမီးများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော ambivalent, benevolent and ရန်လိုသောလိင်မှုကျူးလွန်မှုများရှိသည်။ ထို့အပြင် Fifty Shades ကို“ အချစ်ဇာတ်လမ်း” အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသော ambivalent and benevolent sexism တွင်ရှိသည်။
ကွဲပြားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏ centerfold ပုံရိပ်တွေထိတွေ့အောက်ပါယောက်ျားကိုကြည့်ဆီသို့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2015) - ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ centerfolds ထိတွေ့အမျိုးသမီးများလိင်ကသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်ယောက်ျားပိုမိုလက်ခံမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကကွဲပြားခြားနားသော explicitness ၏အလယ်ဗဟိုခြံနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အထီးအကြည့်အပေါ်အမျိုးသမီးငယ်များ၏သဘောထားကိုတိုင်းတာ။ Explicitness ကိုသခင့်အဝတ်အစားများအဖြစ်ခွဲစိတ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ centerfolds ထိတွေ့အမျိုးသမီးများနေ့ချက်ချင်းထိတွေ့ပြီးနောက်တစ်ဦး 48 နာရီနောက်ဆက်တွဲမှာလျော့နည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ centerfolds ထိတွေ့အမျိုးသမီးတွေထက်အထီးအကြည့်ပိုမိုလက်ခံမှုထုတ်ဖော်ပြောဆို. ဒီရလဒ်တွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့မီဒီယာပုံရိပ်တွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုပြလေလေ၊ အမျိုးသမီးတွေဟာတခြားသူတွေကြည့်ရှုဖို့အတွက်မြင်ကွင်းတွေလို့သူတို့ပေးပို့တဲ့သတင်းစကားကပိုအားကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုထောက်ခံပါတယ်။။ သူတို့ကအစရှင်းလင်းပြတ်သားစွာစင်တာဗဟိုအချက်များနှင့်ထိတွေ့မှုတိုတောင်းခြင်းသည်တောင်မှအမျိုးသမီးများ၏လူမှုရေးအပေါ်ထားရှိသောအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ယောက်ျားရဲ့အ Objectifying မီဒီယာစားသုံးမှု, အမြိုးသမီးမြား၏ Objectification နှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ (2016) ၏အထောက်အပံ့သဘောထားများကို - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
Wright ၏လိင်မှုဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းများရယူခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာလူမှုဆက်ဆံရေး၏လျှောက်လွှာပုံစံတွင်တိကျသောနှင့်စိတ္တဇလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအယူအဆများကိုလမ်းညွှန်သည်။ ဤလေ့လာမှုကဖော်ပြသည်မှာအမျိုးသားများအားပုံဖော်ခြင်းကိုပိုမိုဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်တည်ရှိနေသောအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ပိုမိုရှုမြင်လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ scripting နည်းတိကျတဲ့), နှင့်အမျိုးသမီးပေါ်မှာဤဂုဏ်သိက္ခာကိုကင်းမဲ့စေရှုထောင့်ပြီးရင်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကို (စိတ္တဇလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ scripting နည်း) နှင့် ပတ်သက်. သဘောထားများအကြောင်းကြားဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ။
အမျိုးသမီးများအားလိင်မှုဆိုင်ရာစွဲဆောင်မှုရှိသောကောလိပ်ကျောင်းသားများထံမှအချက်အလက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည် (N = 187) မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီ၊ မီဒီယာအားဖော်ပြခြင်းအားအမျိုးသားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံသည့်သဘောထားများအကြားအသင်းအဖွဲ့များသည်၎င်းတို့၏အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများအဖြစ်ကမကထပြုသည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအားကန့်ကွက်သောအမျိုးသားများ၏လူနေမှုပုံစံစသည့်မဂ္ဂဇင်းများ၊ အမျိုးသမီးများကိုကန့်ကွက်သောလက်တွေ့တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်ထိတွေ့မှုအကြိမ်ရေ၊ နှင့်ညစ်ညမ်းအလှည့်၌, အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံအားကောင်းသဘောထားတွေခန့်မှန်းထားတဲ့, အမျိုးသမီးများ, အကြောင်းပိုမို objectified သိမြင်ခန့်မှန်း.
soft-core ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများသည် 'အမျိုးသမီးများအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားများရှိမည်မဟုတ်' (2016) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ထိုကဲ့သို့သောအဝတ်အချည်းစည်းများနှင့် Semi-အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးမော်ဒယ်ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်ပျော့-Core ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှု, အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘောစဉ်းစားရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးသတင်းစာများ, ကြော်ငြာနှင့်မီဒီယာများတွင်ဘုံပျော့-Core ညစ်ညမ်းမှ desensitised ဖြစ်လာကြပါပြီနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ရလဒ်မကြာခဏကြည့်ရှုအားပေးသူတွေကိုပျော့-Core ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များကဤရုပ်ပုံများကိုထိတွေ့၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ခဲ့သူတွေကိုထက်ညစ်ညမ်းတဲ့အတိုင်းဒီကိုဖော်ပြရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ ဤအရုပ်ပုံများကိုမှ desensitised ခဲ့ကြသည်သူတွေကိုမုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီထောက်ခံမှအခြားသူများထက် ပို. ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျ မကြာခဏကဤပုံရိပ်တွေမိန်းမတို့အားအပြုသဘောဆောင်သဘောထားများရှိသည်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ကြည့်ရှုအားပေးသူတွေကို.
တစ်ဦးကဥရောပလေ့လာမှု (2016): လူငယျမြားရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးမှုနှင့် sexting - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
နည်းပညာအသစ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလူငယ်များအားပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုးချဲ့နေသောအထောက်အထားများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းနှင့်လူငယ်များတွင်အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ဤဆောင်းပါးသည်ဥရောပငါးနိုင်ငံမှအသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြားရှိလူငယ် ၄,၅၆၄ လူငယ်များကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ကြီးမားသောစစ်တမ်းမှတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်။ ။ " စာသင်ကျောင်းများတွင်ပြီးဆုံးခဲ့သောစစ်တမ်းအပြင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုတိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံရှိသောလူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ၉၁ ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမှန်မှန်ကြည့်ရှုရန်နှုန်းသည်ယောက်ျားလေးများအကြားတွင်များစွာမြင့်မားပြီးအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ယောက်ျားလေးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, မှန်မှန်စောင့်ကြည့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသိသိသာသာပိုပြီးအပျက်သဘောကျားသဘောထားတွေကိုကိုင်ထားဖွယ်ရှိဖြစ်နှင့်သောယောက်ျားလေးများ။ အဆိုပါအရည်အသွေးအင်တာဗျူးများ sexting ပုံမှန်အများစုလူငယ်များအားဖြင့်အပြုသဘောရိပ်မိပေမယ့်, ထိုသို့သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရှက်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏လိင်အရအခွင့်အရေး features တွေမျိုးပွားဖို့အလားအလာရှိပါတယ်, ထိုရုပ်ပြ။
တစ်သက်တာဗွီဒီယိုဂိမ်းစားသုံးမှု, Interpersonal မှထုတ်ပြန်သော, ရန်လိုမုန်းတီးမှု Sexism နှင့်မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံ: တစ်ဦးကစိုက်ပျိုးရေးအမြင် (2016) မဟုတ် porn, ဒါပေမယ့်မနီးမဝေးကနေ။ ကောက်နုတ်ချက်:
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူ (N ကို = 351) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလူကြီးများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်ကိုသုံး, လူ့ကျူးကျော်, ambivalent sexism နှင့်ပထမဦးဆုံးယူမှုကို (မှားယွင်းသောအဓမ္မပြုကျင့်မှုစွပ်စွဲချက်များ၏ရာခိုင်နှုန်း) စရိုက်များနှင့် ဒုတိယ-အလို့ငှာစိုက်ပျိုးသက်ရောက်မှု (RMA) ။ ကျနော်တို့လူ့ကျူးကျော်များနှင့်ရန်လိုသော sexism မှတဆင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစားသုံးမှုနှင့် RMA အကြားဆက်ဆံရေးကိုညွှန်းသည်တွေးဆစိုက်ပျိုးမှုမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အနက်မရနိုငျပမေယျ့ကျနော်တို့သုတေသနအဘို့ဤအအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်များ၏သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးပါ။
Porn စာတတ်မြောက်ရေးပညာရေး (2017) ၏ Attenuating အခန်းက္ပ: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီး၏လိင် Objectification ကြားဆက်ဆံရေး - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဎ 1,947 13-25 နှစ်အရွယ်အကြားကဒီ longitudinal လေ့လာမှုကျနော်တို့ attenuate မှကျောင်းများမှာညစ်ညမ်းစာတတ်မြောက်ရေးပညာရေး၏အလားအလာဆန်းစစ်ဖွငျ့ဤ lacuna ဖြေရှင်းရန်စတင် လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (SEIM) မှထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များအကြား longitudinal ကြားဆက်ဆံရေး။ တစ်ဦးက Two-လမ်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်ထွက်လာ: SEIM နှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးအားနည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်, ပိုအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းစာတတ်မြောက်ရေးပညာရေးမှလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကျားသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုက, အရှင်မလိုလားအပ်သောမီဒီယာသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချမီဒီယာပညာရေး၏အခန်းကဏ္ဍတချို့ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်အမြိုးသမီးမြားအပျေါအ (2017) ယောက်ျားရဲ့သဘောထားတွေပုံစံသွင်းသွင်း - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
သင်တန်းသားများကို (N ကို = 330) 17-54 နှစ်ပေါင်း (M = 20.65, SD က = 3.06) မှအသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိကြီးမားသော, အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြိုလူဖြစ်ကြ၏။ သင်တန်းသားများကိုအများစုဖြူ (84.9%) နှင့်လိင်ကွဲ (92.6) အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးပွီးနောကျ, သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းလေ့လာမှုပြီးစီး။
ရလဒ်များပထမဦးဆုံး၏အနိမ့်အသက်အရွယ်ကြောင့်ညွှန်ပြ ညစ်ညမ်းထိတွေ့အမျိုးသမီးများနေ့ကျော်ပါဝါနှင့် Playboy ပုလ်စံချိန်စံညွှန်းနှစ်ဦးစလုံးမှပိုမိုမြင့်မားလိုက်နာမှုဟောကိန်းထုတ်။ ထို့အပြင်မသက်ဆိုင်ညစ်ညမ်းဖို့ယောက်ျားရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏သဘောသဘာဝ၏ (ဆိုလိုသည်မှာ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမတော်တဆ, ဒါမှမဟုတ်အတင်းအကြပ်), အမြိုးသမီးမြားကိုကျော်ပါဝါနှင့် Playboy ပုလ်စံမှအညီအမျှလိုက်နာသင်တန်းသားများ။ အမျိုးမျိုးသောရှင်းလင်းချက်သည်ဤဆက်ဆံရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မတည်ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ရလဒ်ယောက်ျားနှင့်အတူလက်တွေ့ setting တွင်ထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်ဆွေးနွေးခြင်း၏အရေးပါမှုကိုပြသပါ။
တစ်မဂ္ဂဇင်းသန်းကိုပိုမို: အိမ်အပြန်မှာ '' Mags, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်မုဒိမ်း Proclivity (2017) အကြားတွင်အဆိုပါ Links များ Exploring - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ယောက်ျားလေးစာဖတ်သူလူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့်မဂ္ဂဇင်းအချို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်မကြာသေးမီကလိင်အကြမ်းဖက်မှုများအပါအ ၀ င်အမျိုးသမီးများအားစော်ကားသောအပြုအမူများနှင့်သဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာစပိန်အရွယ်ရောက်အမျိုးသားအုပ်စုတစ်စုဟာယောက်ျားလေးမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးဒုတိယအုပ်စုဟာကြားနေမဂ္ဂဇင်းအဖုံးများနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်များအရဒုတိယအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမုဒိမ်းမှုလက်ခံခြင်းကိုမြင့်မားစွာပြသခဲ့ပြီးထိုမဂ္ဂဇင်းများကိုအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေသည့်အိမ်သာမဂ္ဂဇင်းအဖုံးများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောပါ ၀ င်သူများသည်မသိမသာအခြေအနေတစ်ခုတွင်မုဒိမ်းမှုပိုမိုများပြားလာကြောင်းတင်ပြခဲ့သည်.
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း Myth ဟာအတည်ပြုချက်: Sexism ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်သမိုင်း, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး (2018) - Prostution Myth (ထောက်ခံချက်သည်အမျိုးသမီးများအားစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်) နှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း။
လိင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အမျိုးသမီးများဝယ်လက်နှင့်လူကုန်ကူးသူများအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်သားကောင်ကနေသားကောင်အပြစ်တင်ကြုံတွေ့ကြသည်။ လိင်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်ကိုအဆိုးအမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုပုံမှန်မူကြောင်းကိုပြည့်တန်ဆာဒဏ္ဍာရီလိုက်နာမှုကနေဘက်လိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ကျား, မ, အမြိုးသမီးမြားအပျေါအညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေတိုးလာနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုသိသိသာသာပြည့်တန်ဆာဒဏ္ဍာရီလိုက်နာမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုရိုးရာပုလ်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကြည့်ရှုရန်ပြန်ပြောပြပါသလား? (2018) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
သာ. ကွီးမွတျကြီးစိုးနှင့်ဣတ္သဘောတရား၏ရှောင်ရှားညစ်ညမ်း၏ယောက်ျားရဲ့အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားရဲ့အတင်းကျပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် heterosexist အယူဝါဒညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ညစ်ညမ်းသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဣတ္သဘောတရား၏ယောက်ျားရဲ့အရှောင်ရှားခြင်းအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခက်အခဲများခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအပျေါအတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အမျိုးသားများတွင်ခေါ်ဆောင်သွားညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှလျော့နည်းသွားစေ၏စမ်းသပ်သက်ရောက်မှု: objectification, sexism, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (2018) အမျိုးသားအဆင့်အဆင့်နိမ့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ (ဥပမာ - အကြမ်းမဖက်၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှု၊ လူမဆန်ခြင်း)၊ လေ့လာမှုက ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာခြားနားချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရပ်များဟာကောလိပ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ 82 ဘွဲ့ကြိုယောက်ျားကျပန်းသုံးအခြေအနေများ (စော်ကားသော, erotica, ဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု) ၏တဦးတည်းမှတာဝန်ပေးအပ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, တစ်ဦးအဖြစ်စော်ကားသောညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ, အကြမ်းမဖက်, debasing, dehumanizing), ခေါ်ဆောင်သွားညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ non-စော်ကားသော, အကြမ်းမဖက်, ကြည်ကြည်), သို့မဟုတ်သတင်းကလစ်: သူတို့ကျပန်းနှစ်ခုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 မိနစ်ကလစ်များထဲကတစ်ခုစောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ပေးခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေအတွင်း ထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေ။
erotica မှထိတွေ့မှု (vs။ (degrading) သည် porn actress နှင့် [နှင့်] erotica နှင့်ထိတွေ့မှုအားလျော့နည်းစေသည်။vs။ အဆုံးစွန်သောအဘို့ omnibus Non-သိသာခဲ့ပေမဲ့ထိန်းချုပ်မှု) ကိုလည်း, အအယောင်ဆောင်ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆီသို့အကြီးမြတ်ဆုံးခွဲခြားဆက်ဆံမှု generated ။ ညစ်ညမ်းလျော့နည်းသွားစေရန် exposure (vs။ erotica သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု) ကိုကလစ်ထဲမှာအင်အားအကောင်းဆုံးဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက်တွေနဲ့မိန်းမ objectification ၏အကြီးမြတ်ဆုံးပမာဏကိုထုတ်ပေး။
သည်အခြားယောက်ျား (2019) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ခန့်မှန်း - ကောက်နှုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုလူတို့သညျအဘို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အတွေ့အကြုံများနှင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များအကြား link ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်လိင်အပြုအမူ objectifying ပြဋ္ဌာန်းဖို့ပိုများပါတယ်ထားတဲ့ယောက်ျားစူးစမ်းရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျနော်တို့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, အလိင်တူချစ်သူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, လိင်နှင့် queer (LGBTQ) အသိုင်းအဝုိင်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်အပါအဝင်, (မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာအောင်, ခန္ဓာကိုယ်အကဲဖြတ်မြားတှငျပါဝငျခွငျးဥပမာ) အခြားယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ခန့်မှန်းလေ့လာ 450 လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်, ယောက်ျားရဲ့ကျား, မအခန်းကဏ္ဍပဋိပက္ခ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သည်, LGBTQ ရပ်ရွာထဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသွင်အပြင်အပေါ်ထားရှိကြောင်းအရေးပါမှုထင်ရှား နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု လူတို့သညျအကြားနှင့်လျော့နည်းတင်းကျပ်ချစ်ခင်အပြုအမူ လိင်ကတခြားယောက်ျား objectifying မှထူးခြားဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
ပုလ်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်း Views: Self-လေးစားမှု၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2019) - ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အာဏာရှိလိုသောဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မမျှတဘူး ကောက်နုတ်ချက်များ
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်း, ဘာသာရေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်များအတွက်ထိန်းချုပ်ခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပလေးဘွိုင်စံနှုန်းများကိုပါပြrevealedနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အနိုင်ရစံနှုန်းများသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအသင်းအဖွဲ့များတွင်အမျိုးသမီးများ၏စံသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အာဏာသည်ရှုထောင့်အားလုံးအပေါ်တွင်တသမတ်တည်းအပြုသဘောဆောင်သောတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
interaction ကအလားတူပလေးဘွိုင်စံချိန်စံညွှန်းမှညီညွတ်မှုနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုသက်သေ, Self-လေးစားမှုအတွက်အနိမ့်သောသူတို့အဘို့တခု exacerbation အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ။ တွေ့ရှိချက်ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းကြည့်ရိုးရာပုလ်သူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေမှချည်ထားသောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆင့် 10 High School တွင်ကျောင်းသားများ (2019) တွင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှုမှ Exposure အကြားအဆိုပါအစည်းအရုံး - လေ့လာမှုကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်းသည်မုဒိမ်းမှုဒဏ္acceptanceာရီများလက်ခံခြင်းနှင့်ကျား၊ သို့သော်လေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက်မှာ -
ပုံစံများကျား, မများကကွဲပြားသော်လည်းအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု, TDV အမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မိန်းကလေးငယ်များ2ကြိမ်ကျော်သူတို့ရဲ့ Non-ထိတွေ့ counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ် TDV ခြိမ်းခြောက်ကျူးလွန်ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိစဉ်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ယောက်ျားလေးများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ TDV ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ TDV သားကောင်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ 3-1.5 ကြိမ်ရှိကြ၏။
# (ကျွန်ုပ်) အလွန်အကျွံ? ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္acceptanceာရီများလက်ခံခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရာတွင်အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၉) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ပျော့ပျောင်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားနှင့်သဘောထားများသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အပြောင်းအလဲရှိသည်။ (2019) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
ဤစာတမ်းသည်ဤပါ ၀ င်သူများသည်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သူများ (N = 242) အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက် Pre-post-test ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားနှင့်ယောက်ျားအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ထိတွေ့မှုအရသိသာသောပြောင်းလဲမှုများကိုမကြုံတွေ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် သို့သော်လိင်မှုဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုပုံဖော်ထားသောဗီဒီယိုများနှင့်ရန်လိုသောအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမုဒိမ်းမှုများကိုဖော်ပြသည့်မြင်ကွင်းများအတွက်ရန်လိုသောအမျိုးသားများ၏ယုံကြည်ချက်အပြောင်းအလဲများကိုပြသသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုကျား၊ မရေးသီအိုရီ၊ လိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသီအိုရီနှင့်စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကြည့်ရှုသောသီအိုရီအရပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဆွေးနွေးသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြုခြင်းကင်းမဲ့သောဖြစ်စဉ်များ (၂၀၂၀) - အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ဆက်စပ်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်တက်ရောက်သူ ၂၆၆ ဦး (၇၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများ၊ MAge = ၃၀.၇၉၊ SD = ၈.၈၉) ၎င်းတို့သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအားမူလနှင့်အလယ်တန်းစိတ်ခံစားမှုများကိုမည်မျှဆက်စပ်သည်ဖြစ်စေမဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေလူ ဦး ရေစာရင်းဇယားများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များကိုလူမဆန်စွာညှင်းဆဲခြင်း၊ လူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောအပြစ်ပေးခြင်းများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူများတားဆီးခြင်းစသည့်ပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဤရလဒ်သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုပျက်ပြယ်စေရန်မဟာဗျူဟာများဖန်တီးရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
အမျိုးသားရွယ်တူချင်းထောက်ခံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု - အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းအားကစားများတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်လိင်မတော်မတရားပြုမူမှုအကြားဆက်စပ်မှု (၂၀၂၀) - လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်မှု၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်ရန်လိုမုန်းတီးမှုများ၊ - လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု၊ အခြေခံဆက်စပ်မှုနှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာ။ နံပါတ် (၈) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုဖြစ်သည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၏မြစ်ဆုံပုံစံ - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများနှင့်လျှောက်လွှာ (၂၀၂၀) - S၁၀ တန်းကျောင်းသူလေးများကလေ့လာဆန်းစစ်မှုမှာအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရိုက်နှက်မှုသည်ပြီးခဲ့သည့် ၆ လအတွင်းအဆက်အသွယ်မရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အဆက်အသွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၊ မုဒိမ်းမှုဒဏ္sာရီများကိုလက်ခံခြင်း၊ ပိုမိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဇယား
လူငယ်များအကြားတွင်အပြာစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - လေ့လာမှုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
တနည်းအားဖြင့် ANOVA ၏ရလဒ်များအရယခင်နှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည့်ဖြေဆိုသူများနှင့်မကြည့်ရှုသူများအကြားအမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍ သိသိသာသာကွာခြားမှုရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အထူးသ, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသောဖြေဆိုသူများသည်အမျိုးသမီးများအပေါ် ပို၍ ဆိုးကျိုး၊
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်ရင်းနှီးသောလက်တွဲဖော်ဆိုက်ဘာစကားပြောခြင်း၊ လိင်၊ - ကောက်နှုတ်ချက်:
ရန်လိုခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်လိင်မှုကိစ္စနှစ်မျိုးစလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည် နှင့်အပြုအမူ sexting ။ ထို့ကြောင့် လိင်အရအခွင့်အရေးများပိုသောယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်အပြာစာအပြာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုကြသည် နှင့်ပိုမို sexting အပြုအမူတွေဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကပြသသည် အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်မိန်းကလေးများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပိုစော်ကားသည်။ ထို့အပြင် sexting အပြုအမူများပိုမိုလုပ်ဆောင်သောပိုမိုကြင်နာသောလိင်အရယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်လေ့ရှိသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များ။ ။ (၂၀၂၁) ကောလိပ်အမျိုးသားများနမူနာပုံစံဖြင့်မြစ်ဆုံပုံစံ၏မဏ္pillိုင်လေးခုကိုစမ်းသပ်ခြင်း - အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအပါအ ၀ င်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် ရန်လိုပုလ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ဆက်သွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်နှင့်အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကိုဆက်သွယ်:
'သူမ' သည် 'သူ' ဖြစ်လာသည့်အခါ (2019) (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)
အဆိုပါဥပစာ (2019) ထက်ကျော်လွန်သွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဖြစ်စဉ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ objectified လူ့ပစ်မှတ်များနှင့်တ္ထုဆီသို့ဦးတည်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ် (အပြည့်အဝလေ့လာမှု)